खुर्सानीको पिरो-कथा !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १०, २०७६ घनश्याम खड्का
नेपालमा पिरो, अलिअलि पिरो र ज्यादै पिरो गरी सबै खालका १५ थरी खुर्सानी पाइन्छन् । सबभन्दा पिरो डल्ले भनिने अकबरे हो । साह्रै पिरो हुने हुनाले मानिसहरू यसलाई ज्यानमारा पनि भन्छन् । त्यसभन्दा पनि साह्रै पिरो सानो काँटीको खुर्सानी हुन्छ, त्यसलाई मान्छेहरू जिरे खुर्सानी भन्ने गर्छन् । तर, त्यसभन्दा पनि पिरो खुर्सानी नेपालमा छ । दैनिक–जीवनमा जोडिएको नवै द्वारमा कम्पन पैदा गर्ने खुर्सानीबारे एक आलेख :
नवै द्वारमा कम्पन पैदा गर्ने कुनै खानेकुरा छ भने त्यो के होला ? उत्तर आइहालेन भने पनि धेरै घोत्लिरहनु पर्दैन । बरु, एउटा पिरो खुर्सानी टोक्नुस्, अनि त्यसको तीव्र प्रतिसंवेदन–स्मृति सम्प्रजन्यका साथ महसुस गर्नुस् ।
प्रस्टै छ— तपाईंको जिब्रो पोल्नेछ, दुवै आँखा टिलपिल हुनेछन्, नाक रसाउन थाल्नेछ । जिनिस बढी नै पिरो छ भने अलिक ख्याल गर्नुहोला, कान रनक्क तातेजस्तो पाउनुहुनेछ । भोलिपल्ट शौचादि कर्मका क्षण मूलाधार चक्रछेउमा त्यस्तै एक तीव्र जलन अनुभव हुनेछ । दुई आँखा, दुई कान, दुई नासिका, खटप्वालजस्तो एक मुख र एक शौचद्वार गरी आठ स्थानमा त खुर्सानीको प्रभाव अब प्रस्ट भइहाल्यो । धेरैलाई थाहै छ, बाँकी एक हो यो चराचर सृष्टिको द्वार । तर, त्यहाँ खुर्सानीको प्रभाव के पर्छ भन्नेचाहिँ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
पोषणविद्हरू भन्छन्, खुर्सानीले रतिरागलाई मात्रै उकास्दैन, क्रियाशक्ति पनि बढाउँछ । खानपानबारे लेखिएको प्रसिद्ध पुस्तक ‘द ग्रेट अमेरिकन डिटक्स डाइट’ की लेखिका अलेक्जेड्रा ज्यामिसन आफ्नो परामर्शमा आउनेहरूलाई खुर्सानीको यस फाइदाबारे पनि बताउँछिन् । उनले हालै लिभिडो (कामशक्ति) बढाउने प्राकृतिक खाने कुराका बारेमा लेखेको एक आलेखमा खुर्सानीलाई पनि समावेश गरेकी छन् ।
खुर्सानीमा पाइने पिरो तत्त्व क्याप्सिसिनले कामशक्ति बढाउँछ भन्ने मत त जीवशास्त्रीहरूको पनि छ । समागमका लागि कामाङ्गमा रक्तप्रवाह ज्यादा हुनुपर्छ । खुर्सानीले रक्त प्रवाहमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा रतिक्रीडाको क्षमतामा पनि पुग्न जाने उनीहरूको निचोड अनुसन्धानसिद्ध छ ।
यति बुझिसकेपछि अब प्रस्टै भयो, शरीरका सबै द्वारमा उत्तिकै असर पार्न सक्ने खुर्सानीजत्तिको प्रचलित खाने कुरा अर्को छैन । प्रायः सबैतिर खाइने यो खुर्सानी मान्छेको मुखमा नियमित पर्न थालेको १० हजार वर्षजति भएको अनुमान वैज्ञानिकहरूको छ । हाम्रा वनस्पतिशास्त्री डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठलाई मन पर्ने धेरै वनस्पतिमध्ये एउटा हो— खुर्सानी ।
‘किन पनि मलाई यो राम्रो लाग्छ भने म एसिडिटीका कारण अचेल मुख बार्न थाल्नुअघिसम्म खुर्सानी स्वाद मानेर खाने गर्थें,’ उनी भन्छन्, ‘खुर्सानी मेरा लागि पुराना दिनको सम्झना गराउने वनस्पति पनि हो ।’काठमाडौंको महाबौद्धमा जन्मेका श्रेष्ठका बाबु अँगेनामा खुर्सानी पोलेर स्वादले खाने गर्थे । त्यही उपक्रममा खुर्सानी खान थालेका रहेछन् उनले पनि ।
डेढ दुई दशकअघिसम्म भदौको महिना भक्तपुर, काठमाडांैं र ललितपुरका पुराना नेवारी बस्तीका झ्याल–झ्यालमा मालाझैं झुन्ड्याएर राखिएका राता खुर्सानीका माछीकाँडे लहर थपक्कसँग बसेका छन् उनको सम्झनामा । तिनताक खुर्सानी सुकाउने त्यस दृश्यले उपत्यकावासीहरू स्वतः बुझ्थे, अब वर्षा समाप्त भयो र शरद लाग्ने बेला भयो ।
‘मौसम सम्झाउने खुब गज्जबको कृषिकर्म थियो त्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब त उपत्यकामा न खुर्सानी फल्ने बारीहरू छन्, न त्यसलाई झुन्ड्याउने पुराना झ्यालहरू नै ।’वनस्पतिशास्त्रको अध्ययन गर्दाताका खुर्सानीबारे गरेको अनुसन्धान र भदौरे झरीमा पोलेको मकैसँग होस् वा चिरेको काँक्रासँग, उपत्यकाका खुर्सानीको लेप लगाएर मुखभरि रसहरू उत्पादन गर्दै खान्थे तीर्थ ।
उनका अनुसार नेपालमा पिरो, अलिअलि पिरो र ज्यादै पिरो गरी सबै खालका १५ थरी खुर्सानी पाइन्छन् । त्यसमध्ये धेरैलाई के लाग्छ भने, सबभन्दा पिरो डल्ले भनिने अकबरे हो । साह्रै, पिरो हुने हुनाले मानिसहरू यसलाई ज्यानमारा पनि भन्छन् । त्यसभन्दा पनि साह्रै पिरो सानो काँटीको खुर्सानी हुन्छ, त्यसलाई मान्छेहरू जिरे खुर्सानी भन्ने गर्छन् । तर, त्यसभन्दा पनि पिरो खुर्सानी नेपालमा छ भन्छन् श्रेष्ठ ।
‘खाँदबारीतिर जातिविधी पिरो हुने खुर्सानी पाइन्छ, एउटै खुर्सानीले सिंगै राँगाको मासुलाई पिरो पार्न पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले स्थानीयहरू त्यस खुर्सानीलाई राँगे खुर्सानी भन्ने गर्छन् ।’वनस्पतिशास्त्रको चस्माले खुर्सानीको बारेमा अध्ययन गर्दै जाँदा श्रेष्ठले रोचक इतिहास पनि भेट्न पुगेका रहेछन् ।
‘चीनसँग युद्धमा हारेपछि नेपालले बर्सेनि भोटलाई तिरोको रूपमा केही मुरी खुर्सानी तिर्ने गरेको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट नेपाल खुर्सानी फल्ने देश हो भन्ने त प्रस्ट हुन्छ नै, चिनियाँहरू पनि खुर्सानीमा विशेष चासो राख्छन् भन्ने पनि खुल्न आउँछ ।’
खुर्सानी नेपालमा फल्ने भए पनि यसको उत्पत्ति भने दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिकोमा भएको हो । मेक्सिको र त्यस महाद्विपका मानिसको जिब्रालाई कम्तीमा १० हजार वर्षदेखि नै खुर्सानीले रन्थन्याउन थालिसकेको देखिन्छ । कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउँदा काउली, गोलभेंडालगायतका थुप्रै तरकारी र वनस्पतिसँगै खुर्सानी पनि संसारमा ल्याए र बाँकी संसारमा यो फैलियो । त्यस उपक्रममा संसारभर स्थानीयकरण पनि हुँदै गर्दा अनेकथरी खुर्सानीहरूको विकास हुँदै गएको तथ्य हाम्रा वनस्पतिविद् श्रेष्ठको शोधले देखाएको छ । खुर्सानीबारे भएको एक अध्ययनअनुसार, युरोप र उत्तरी अमेरिकामा सबभन्दा कम खुर्सानीको खपत हुन्छ भने दक्षिण अमेरिका, एसिया र अफ्रिकामा सबभन्दा बढी खुर्सानी खानेहरू बसोबास गर्छन् ।
खानेकुरा जति धेरै भए पनि स्वादका हिसाबले ती जम्मा ६ थरी छन्, गुलियो, नुनिलो, अमिलो, पिरो, तितो र टर्रो । संसारमा सबभन्दा धेरै मानिसले खाने भनेको गुलियो हो, किनभने यो मिठो हुन्छ र खाँदा कसैले आँसु बगाउनु पर्दैन । फेरि, गुलियो स्वादका स्रोत पनि असंख्य छन् । त्यस्तै अमिलो, पिरो र टर्रो स्वादका स्रोत पनि उत्तिकै छन् । नुन वनस्पतिजन्य पदार्थ नभई खनिज भएको हुनाले यसको विविधीकरण हुने भएन । तर, वनस्पतिबाट मिल्ने पिरो स्वाद भने खुर्सानीमा मात्रै पाइन्छ । यस्तो लाग्छ, खुर्सानीले ब्रह्माजीसँगै पेटेन्ट राइट लिएको छ पिरोको ।
हुन त, झट्ट खाँदा पिरपिरो लाग्ने चाउरिएको सानो गेडो पनि छ, जसलाई हामी मरीच भन्छौं । तर, त्यसमा क्याप्सिसिन पाइन्न जो खुर्सानीमा हुन्छ । मरीचमा त पेपराइन भन्ने पदार्थ भेटिन्छ, जसले गर्दा जिब्रामा राख्नेबित्तिकै पिरोजस्तो अनुभव हुने काम गराउँछ । मरीचमा सबै दानामा समान रूपले पेपराइन पाइने हुँदा यो फल साम्यवादीजस्तो भने पनि हुन्छ । खुर्सानीचाहिँ पुँजीवादी चरित्रको छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा मानिस कुनै व्यापक धनी, कोही मध्यम र कोहीचाहिँ निर्धन भएजस्तै खुर्सानीमा पनि कुनैमा अचाक्ली क्याप्सिसिन, कुनैमा ठीकै र कुनै हुँदै नभएको तन्नमसमेत हुन्छन् । क्यारोलिना रिपर सबभन्दा बढी क्याप्सिसिन अर्थात् पिरोपन भएको खुर्सानी हो ।
डा. श्रेष्ठले सानोमा देख्ने गरेको उपत्यकाका ठिक्कका पिरो लाम्चा खुर्सानीचाहिँ मध्यम वर्गका पर्न आउँदा हुन् । त्यस हिसाबले हेर्दा भेडे खुर्सानीचाहिँ हरितन्नम सर्वहाराजस्तो छ । सर्वहारासँग जसरी सम्पत्तिको नाममा कौडी पनि हुँदैन, यो मोरो भेडे खुर्सानीसँग पनि एक जात क्याप्सिसिन छैन ।
तर रमाइलो के भने, सर्वहाराहरू बिल गेट्स मार्काका सबभन्दा पिरो खुर्सानी खान रुचाउँचन्, जसरी गरिबहरू सम्भ्रान्त जीवनको सपना देखेर थाक्दैनन् । अनि सम्भ्रान्तहरूचाहिँ हत्तपत्त चिल्लो पिरो भोजन ग्रहण गर्देनन् । उनीहरूको रोजाइमा सलाद पर्छ, जसमा त्यो खुर्सानीको जातमा क्याप्सिसिनका हिसाबले हरितन्नम भेडे खुर्सानी हमेसा पर्छ, जसरी धनीहरू सरल हुन मिहिनेत गरेजस्तो गर्छन् !
मेक्सिकोमा उत्पत्ति भए पनि मानवीय क्रिया–व्यापारका दौरान लगभग सबै देशमा अचेल उम्रिन्छ र पृथ्वीको हरेक तेस्रो मान्छे दैनिक खुर्सानी खाने गर्छ भन्ने रमाइलो तथ्याङ्कका साथ सन् २०१० को १४ सेप्टेम्बरका दिन बेलायती पत्रिका ‘द गार्जियन’ ले डेभलप्मेन्टल साइकोलोजिस्ट जासोन गोल्ड म्यानको एक आलेख छापेको थियो ।
उनको खोज रमाइलो छ । उनी भन्छन्, मनुष्य जातिमा प्राणाघात गर्ने एक वृत्ति हुन्छ । हात्ती, गोही, कछुवा, चरा, सर्प, मृग आदि कुनै प्राणीले पनि जानाजान आफूलाई हानि हुने काम गर्दैनन् । तर मान्छे, क्यान्सर हुन्छ भन्ने थाहा पाईपाई चुरोट तान्छ, रक्सी पिउँछ र गहना लगाउने नाममा नाक–कान प्वाल पार्छ । समग्रमा आफूलाई दुःख दिएर रमाउने एक अनौठो र घातक बानी मनुष्य जातिमा बाहेक अर्कोमा पाइँदैन । मनोविद् जासोन खुर्सानी खानुलाई पनि मान्छेको यही अनौठो वृत्तिलाई कारण मान्छन् ।
‘खुर्सानीमा त्यस्तो रहरलाग्दो कुरो के छ ?’ उनको प्रश्न छ, ‘खाएपछि ज्यानै जालाजस्तो हुन्छ, र पनि मानिसहरू खान्छन्, किन त ?’किनभने, प्राणाघात गर्ने उही वृत्तिले यहाँ काम गरेको छ । बालबालिकाहरू सरल चित्तका हुन्छन् । उनीहरूमा जीवनको नैसर्गिक मोह हुन्छ र वृत्तिगत हिसाले अरुचिकर खाना उनीहरू खाँदैनन् ।
‘त्यसैले कुनै बालबालिका पिरो खान मन पराउँदैनन्,’ जासोन भन्छन्, ‘तर पछि, बाबुआमाले खाएको देखेपछि, समाजका अरू गतिविधिमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा हुर्कंने क्रममा त्यही बालक पछि खुर्सानी खाने बानी बसाल्न पुग्छ ।’ खुर्सानी खानेहरूको आनीबानी नियाल्यो भने उनको तर्क उचितै जँच्न आउँछ । उदाहरणका लागि १२ कक्षाकी छात्रा प्रशंसा उप्रेतीकै कुरा गरौं न ! उनकी आमा खुब खुर्सानी खान्थिन्, जसलाई उनले सानैदेखि देख्दै आएकी थिइन् ।
‘सात वर्षजत्तिकी भएपछि मैले पनि खुर्सानी टोकें, पछि अलिअलि गर्दै बानी पर्‍यो’ हेटौंडा बसमाडीकी १८ वर्षीया उनी भन्छिन्, ‘कलेज जाने बेलासम्म त म दिनमै तीन–चारवटा खाने भएँ ।’ बिहान–बेलुका भातसँग मात्रै होइन, दिउँसो खाजाका रूपमा चटपटेमा हालेर अति खुर्सानी खाने गर्नाले उनको आन्द्रामा घाउ भएछ, जसलाई डाक्टरी भाषामा अल्सर भनिन्छ । हाल उनलाई डाक्टरले खुर्सानी खान प्रतिबन्ध लगाएका छन् । ‘तर, मलाई खुर्सानीबिना भात खाएजस्तै लाग्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘के गर्नु, खाएपछि पेट बिग्रन्छ भनेपछि खान पनि भएन !’
हुँदैन भन्दाभन्दै पनि कहिलेकाहीँ त उनी खुर्सानी हाइहाल्छिन् । पेट पोल्न पूरै निको भएपछि पहिलेजस्तो नभए पनि थोरै खुर्सानी खानाका साथ अवश्य खाने विचारमा उनी छन् । नवद्वारै प्रकम्पित पार्ने खुर्सानी खान यस्तो जिद्दी प्रतिज्ञा गर्न मस्तिष्कको कुन तन्तुले उस्काउँछ त ?
यसबारे पनि मनोविद्हरूको रोचक खोजबिन छ । पीडालाई कम गराउने खास किसिमको जीव रसायन छ, जसलाई अंग्रेजीहरूले इन्डोर्फिन नाम दिएका छन् । शरीरमा पीडा हुँदा र तनावले घेर्दा जीवनरक्षाका लागि मस्तिष्कबाट निस्पत्ति हुने यो रसायन निस्केपछि पीडा कम भएजस्तो अनुभव हुन्छ । शारीरिक व्यायाम गर्दा र सहवासका क्षण आनन्द हुने यही जीव रसायन निस्कनाले हो । स्नायुशास्त्रका अनुसार, खुर्सानी खाएपछि जीब्रोमा हुने अतिशय जलनलाई मस्तिष्कले ठूलो शारीरिक कष्ट आएछ क्यार भन्ने ठान्न पुग्छ र तुरुन्त इन्डोर्फिन छाडिदिन्छ । पिरो घट्दै गएपछि पहिलेभन्दा मन रमाएजस्तो हुन पुग्छ र अवचेतन मनमा खुर्सानीको माग बढ्दै जान्छ, त्यसैले पिरो भए पनि आँसु निकाल्दै खुर्सानी खाइरहनाको कारण यही हो । यो भनेको, हामी बिमारी पर्दा परिवारजन र मित्रमण्डलीले बढी माया प्रदर्शन गरेजस्तो हो । बिरामी पर्दा मात्रै बाबुआमाको ध्यान पाउने छोराछोरी र पतिको माया पाउने पत्नीहरू बिरामी नै नभए पनि भएजस्तो गरी ढाँट्ने बानीको सिकार हुन पुग्छन् । खुर्सानीका सम्बन्धमा पनि पछि करिब–करिब त्यस्तै हुन पुग्छ । मस्तिष्कले जलन अनुभव गरेपछि इन्डोर्फिन दिने हुनाले हामी खुर्सानीको सहाराले जिब्रामा दिनहुँ कृत्रिम आगलागी गराउँछौं र अलिकति इन्डोर्फिन निकाल्न लगाएर केही राहत अनुभव गर्छौं ।
बिनाव्यायाम र सहबास इन्डोर्फिन निस्पत्ति गराउने यो रणनीतिको संसारका हरेकजसो देशमा सेलिब्रिटीहरूका साथमा ठूलठूला स्पर्धासमेत हुने गरेको छ, जहाँ प्रतियोगीहरूले कम परिमाणदेखि ठूलो सर्वाधिक परिमाणसम्मको खुर्सानीहरू खान्छन् । खुर्सानीको पिरोपन नाप्ने एक विशेष एकाइ छ, जसलाई स्केभिल हिट युनिट (एसएचयु) भन्ने गरिन्छ । सात सयसम्म एसएचयू भएको खुर्सानी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि परेको मान्छेजस्तै पिरोपनका हिसाबले तन्नम मानिन्छ । ७ सय देखि ३ हजार हिट युनिटको खुर्सानी कामचलाउ खर्च धानिरहेको निम्न मध्यम वर्गको मान्छेजस्तो हो, जोसँग पिरो पनि भए–भएजस्तो मात्र हुन्छ नजानिँदो पारामा । त्यस्तै, ३ देखि २५ हजार हिट युटिनको खुर्सानी मध्यम वर्गको मान्छेजस्तो हो, जोसँग पिरोपन पनि मध्यमस्तरमै हुन्छ । उच्च मध्यम वर्गको मान्छे भएजस्तै उच्च मध्यम वर्गको खुर्सानी पनि छ, जसको हिट युनिट २५ देखि ७० हजारसम्म हुन्छ । यी खुर्सानी प्रशस्त पिरा मानिन्छन् । हाम्रा डल्ले, जिरे र ज्यानमारा खुर्सानी यसै वर्गमा पर्छन् । त्यसभन्दा माथिल्लो उच्च पिरो वर्गको खुर्सानी हालसम्म एउटै मात्रै जातको मात्रै पाइएको छ, क्यारोलिना रिपर ।
विश्वभरका युवाहरुमाझ हालकी लोकप्रिय अमेरिकी गायिका बिली आइलिस गत वर्ष एक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘हट वान्स’ मा क्यारोलाइना रिपर नामको खुर्सानी खाएपछि झन्डै बेहोस भइन् । पीडा सहन नसकेपछि छटपटीपूर्ण उनको भावभंगिमा ।
सबभन्दा कम पिरो क्यारोलाइना पनि ८० हजार हिट युनिटको हुन्छ भने हालसम्म पाइएको सबभन्दा पिरोचाहिँ ३२ लाख हिट युनिटको छ । यो खुर्सानी मुखमा परेपछि पिरो खाने बानी नपरेको मान्छे तुरुन्त लडीबुडी गर्दै छटपटाउन र चिच्याउन थाल्छ । गिनिज बुकले सन् २०१३ मा संसारकै पिरो खुर्सानी भनेर अभिलेख राखेको क्यारोलिनाको सस खाने एक टेलिभिजन कार्यक्रममा गएको वर्ष अमेरिकी गायिका बिली आइलिस पीडाले छटपटाएको दृश्य सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल हुन पुगेको थियो । पकौडाजस्तो खाने कुरामा एक थोपो क्यारोलिना रिपरको सस हालेर खाएको केही क्षणपछि नै आइलिसको सर्वथा हँसिलो मुहारमा गहिरो छटपटिको अभिव्यक्ति देखिन थालेको युटुब भिडियो हालसम्म ३ करोडभन्दा बढीले हेरेका छन् र यस्तो संख्या बढ्दो छ । सुन्दरी क्यारोलिना छटपटाएको दृश्यले लोकप्रियता बटुलेपछि यस्ता प्रतियोगिताहरू धेरै हुन थालेका छन् र खुर्सानी मुखमा हाल्नेबित्तिकै छटपटाएका सयौं भिडियोहरू युटुबमा भ्युअर्सबटुल्दै छन् ।
यसरी पश्चिमा मुलुकमा पिरोपनका कारण प्रसिद्धि पनि बटुल्न प्रयोग हुन थालेको खुर्सानीको हामीकहाँ भने केही (अन्ध) विश्वाससँग जोडिएका सांस्कृतिक व्यवहारमा सयौं वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ । प्रेत भगाउन भनेर खुर्सानीको धूप हाल्ने चलन यहाँले देख्नुभएकै होला । ट्रक चालकहरूलाई स्टेरिङनजिक कागती र खुर्सानी झुन्ड्याएर हिँड्न कसले सिकाएको होला ? आँखा नलागोस् भनेर गाउँमा किसानहरू दही छिमेकीलाई दिनुपर्दा एउटा रातो खुर्सानी हाल्न बिर्संदैनथे उहिले–उहिले ।बिस्तारै खुर्सानीसँग जोडिएका यी सांस्कृतिक व्यवहारहरू हराउँदै जान थाले पनि खुर्सानी खाने बानी भने कहिल्यै हराउने छैन । आखिर, इन्डोफिर्न कसलाई चाहिँदैन ? प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ १२:५३
हो, कैयौंपल्ट उसले आफू डिप्रेसनको रोगी र अनिद्राको सिकार भएको कुरा गरेको थियो फोनमा । राम्रो डाक्टरलाई जँचाउनु भन्नेबाहेक हामीले के अरू के भन्ने ? जँचाएको र औषधि खाइरहेको कुरा गर्थ्यो । असम्भवप्रायः कैयौं रोगको उपचार गर्न मानिस अमेरिका जान हुरुक्क हुन्छन् । अमेरिका पुग्न पाए जस्तोसुकै रोगबाट पनि बाँचिन्छ भन्ठान्छन् हाम्रो देशका मानिसहरू । तर, स्वास्थ्य बिमा गरिएको अमेरिकी नागरिक भएर पनि मेरो छोरा बाँचेन । किन ? मलाई यो प्रश्नले जहिले पनि प्रश्न गरिरहन्छ । अमेरिकासँग यो भवावह पीडाको उत्तर छ ?
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ १२:००